Indlu ka-Azaniya - I-Airbnb
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguRochelle
IAzaniah Cabin ibekwe phakathi kwamahlathi ashinyeneyo ahlala kwindawo ephakamileyo apho umntu angakwazi ukubona indawo entle yendalo epholileyo. Le khabhathi yegreenheart iqhayisa ngokukhululeka kwayo, imfihlo kunye nokuphefumla kuLwandle lweCaribbean, kunye nembonakalo yomhlaba yetropiki kunye nokunye ukutshona kwelanga okumnandi kwezakha zabonwa. Indawo ekuzola kuyo kunye nentuthuzelo.
Le propati ye-greenheart yokhuni iqhayisa iimpawu ezizodwa; yokuba noyilo lomgangatho ovulekileyo, iingcango zaseFransi, ibha yesidlo sakusasa evuleleka kwiveranda ebanzi ebanzi kunye neesilingi ezenziwe ngamaplanga. Uyilo lwengqikelelo yomgangatho ovulekileyo kunye nesiqithi esibekwe ngokucwangcisiweyo kunye nebar, iyenza ilungele ukusingathwa kunye nokonwabisa undwendwe lwakho ngoloyiko. Zonke ezi zinto zongeza ukuyinika eso sityebi sityebileyo sasempuma somtsalane kunye nentuthuzelo efuna ukutsala kunye nokuhenda.
Enye into enomtsalane, kukusebenzisana kwezinye zezinto eziphilayo ezityebileyo zesi siqithi. Umntu unokuzonwabisa kwiintlobo ngeentlobo zeentaka eziye zenza le ndawo ipholileyo ingaphazanyiswa ibe yindawo yazo yokuhlala, ngelixa esamkela umbono.
\_u00A0Iibhedi ezinkulu eziyi-2, 1 ibhedi elala abantu ababini, 1 iisofa eziyi-, Ibhedi ekuthiwa yi-hammock eyi-1
4.88 · Izimvo eziyi-90
Ubumelwane buzolile, buzolile kunye neendawo eziluhlaza ezijongene noLwandle lweCaribbean.
Iindwendwe ziyakuhlangatyezwa xa zifika/ziphuma naxa zibizwe ngokukodwa. Ubumfihlo beendwendwe bubalulekile